रोचक Archives - पब्लिक पाेष्ट
December 14, 2018 December 14, 2018 EP EDITORLeaveaComment on एक डेन्टिस्ट, जसले दाँतको उपचारमा आएका पूर्व ब्वाइफ्रेन्डका सवै दाँत उखेलिदिइन्
पोल्यान्डकी एक डेन्टिस्टले आफ्ना पूर्व केटासाथीको सवै दाँत निकालिदिएकी छिन्। आफूलाई छाडेर नयाँ केटीसाथी बनाएको झोकमा उनले यस्तो गरेकी हुन्। अन्ना म्याविक नामकी ती डेन्टिस्टले आफ्ना पूर्व केटासाथीको दाँतको उपचार गर्ने क्रममा गरेको गल्तीले तीन वर्ष जेल सजाय भोग्न सक्ने देखिएको छ। उनका पूर्व केटासाथी मारेक वल्सजेवस्कीले ब्रेकअपको केही दिनपछि दाँत दुख्न थालेपछि डेन्टिस्ट पूर्व […]
कलेजो जोडिएका भुटानी बालिका निमा र दावाको सफल शल्यक्रिया
November 10, 2018 EP EDITORLeaveaComment on कलेजो जोडिएका भुटानी बालिका निमा र दावाको सफल शल्यक्रिया
अष्ट्रेलिया । कलेजो जोडिएका १४ महिनाका दुई भुटानी बालिकालाई मेलबर्नका चिकित्सकहरुले सफलतापूर्वक छुट्टयाएका छन् । शरीर जोडिएका निमा र दावा उपचार गराउनका लागि आफ्नी आमासँग करिब २ महिनाअघि अष्ट्रेलिया आइपुगेका थिए । मेलबर्नमा रहेको मेलबर्न रोयल चिल्ड्रेन अस्पतालमा पेडियाट्रिक सर्जन डा. जो क्रामेरीको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको उक्त सर्जरी ६ घण्टासम्म चलेको थियो। सर्जरीमा करिब डेढ […]
OMG!!! जहाँ महिला गर्छन पुरुषको बलात्कार
November 8, 2018 EP EDITORLeaveaComment on OMG!!! जहाँ महिला गर्छन पुरुषको बलात्कार
अक्सर पुरुषहरुले सडकमा हिड्ने केटीलाई जिस्काउने, नानाथरी टिपणी गर्ने गर्छन् । पुरुष द्वारा मलिाहरु हिंसामा परेको र बलात्कृत भएको घटना अनगिन्ती छन् तर आज हामि तपाईलाई यस्तो ठाउँको बारेमा बताउँदैछौ जहाँ केटा होइन बल्कि केटीहरु नै केटाहरुमाथी अत्याचार गर्ने गर्छन् । महिलाबाट बलात्कृत हुन्छन् पुरुष अफ्रिकाको गिनिमा पुरुषको होईन महिलाको हुकुम चल्छ त्यहाँ महिलाहरु जुन […]
रिसाएका प्रदर्शनकारीका अगाडि मुस्कुराइरहेकी युवतीको फोटो बन्यो भाइरल
November 6, 2018 EP EDITORLeaveaComment on रिसाएका प्रदर्शनकारीका अगाडि मुस्कुराइरहेकी युवतीको फोटो बन्यो भाइरल
काठमाडौं । शनिबार बेलायतको बिरमिङघममा भएको एक प्रदर्शनमा सहभागी प्रदर्शनकारीका अगाडि मुस्कुराइरहेकी एक युवतीको तस्बिर अहिले भाइरल बनेको छ । रिसाएका प्रदर्शनकारीका अगाडि उनी पाइन्टको खल्तीमा हात हाल्दै मुस्कुराउँदै उभिएकी छन् । आतंककारीको हमलाको विरोध गर्न प्रदर्शन गरिएको थियो । इंलिस डिफेन्स लिगका करिब एकसय सदस्य प्रदर्शनमा सामेल थिए । तस्बिरमा भएकी युवती साफिया खान […]
मापसेले मात्तिएका यात्रुले एयर इन्डिया विमानमै पिसाब फेरे
September 1, 2018 EP EDITORLeaveaComment on मापसेले मात्तिएका यात्रुले एयर इन्डिया विमानमै पिसाब फेरे
काठमाडाैं । अमेरिकादेखि भारत-दिल्लीसम्मको फ्लाइटका क्रममा एयर इन्डिया विमानमा एक अनौठो घटना घटेको छ । बिहीबार एएल १०२ विमान उडिरहेका बेला मादक पदार्थको सेवन गरेर मात्तिएका एक व्यक्तिले महिला यात्रुको सिटमा पिसाब फेरिदिएका छन् । ती महिला यात्रुकी छोरी इन्द्राणी गोसले शुक्रबार साँझ यस विषय सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सार्वजनिक गरेपछि घटना बाहिर आएको हो । […]
यी हुन् संसारका ९ अालिशान जेल जुन तारे हाेटल भन्दा कम छैनन्
August 29, 2018 EP EDITORLeaveaComment on यी हुन् संसारका ९ अालिशान जेल जुन तारे हाेटल भन्दा कम छैनन्
काठमाडाैँ । जेल भन्ने बित्तिकै कालाे, अभ्याराे अब्यवस्थित नराम्राे दृश्य अाउँछ । अझ हाम्राे नेपालमा त झन् क्षमता भन्दा तीन चार गुणा बढी अपराधिहरूलार्इ काेचिएकाे खानेपानी, साैचालयकाे राम्राे ब्यवस्था नभएका छन् । तर संसारमा केही यस्ता जेल छन् जुन कुनै पाँच तारे हाेटलकाे सेवा सुविधा भन्दा कम छैनन् । 1-बैस्टोय जेल, नर्वे- बोस्टोय द्वीपस्थित यस […]
भयानक ! सवारी दुर्घटनामा गर्भवतीको पेट फुटेर निस्कियो जिउँदो बच्चा
August 22, 2018 EP EDITORLeaveaComment on भयानक ! सवारी दुर्घटनामा गर्भवतीको पेट फुटेर निस्कियो जिउँदो बच्चा
एजेन्सी । भनिन्छ काल नआएसम्म जे सुकै होस् कसैले पनि मार्न सक्दैन । यो भनार्इलार्इ सत्य साबित गर्ने एक घटना ब्राजिलमा भएको छ । जहाँ एक भयानक सवारी दुर्घटनामा गर्भवतीको मृत्यु भयो तर उनको पेटमा हुर्किदै गरेको बच्चा भने बाँचेको छ । उक्त दुर्घटनामा ती महिलाको पेट फुटेर बाहिर उछिट्टिदै निस्किएको उक्त बच्चा जीवित छ […]
६७ वर्षमा जुम्ल्याहा बच्चासहित गर्भवती, पत्याउनुहुन्छ ?
August 20, 2018 August 20, 2018 EP EDITORLeaveaComment on ६७ वर्षमा जुम्ल्याहा बच्चासहित गर्भवती, पत्याउनुहुन्छ ?
एजेन्सी। एक जना ६७ वर्षिय झ्याङ थरकी गर्भवती महिलालार्इ बेइजिकङका अस्पतालहरूले उनको गर्भावस्था त्याग्न आग्रह गरेका छन् । जुम्ल्याहा बच्चाहरू पेटमा हुर्काइ रहेकी ति महिलाको स्वास्थ्य अवस्थालार्इ हेरेर अस्पतालहरूले यस्तो आग्रह गरिएको समाचारहरूले जनाएका छन् । उच्च रक्तचाप र पाको उमेरका कारण गर्भावस्था लम्ब्याउँदा आमाको ज्यान जोखिममा पर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । तर बच्चा जन्माउन […]
‘सुहागरात’ मै गहना र पैसा चोरेर भागिन् बेहुली…
August 7, 2018 EP EDITORLeaveaComment on ‘सुहागरात’ मै गहना र पैसा चोरेर भागिन् बेहुली…
काठमाडाैं । कहिलेकाहीँ अनौठा घटना हुन्छन्, जसलाई हामीले पत्याउन पनि मुस्किल हुन्छ । नेपालसँगै सिमाना जोडिएको भारतीय राज्य बिहारस्थित भभुआ शहरमा यस्तै एउटा रोचक घटना भएको छ । यो सहरमा एकजना बेहुली सुहागरातकै दिन बेहुलाको घरबाट सबै सामान लुटेर फरार भएकी छन् । सुहागरातकै दिन आफ्ना नयाँ पतिको घर रित्याउने बेहुलीको नाम हो संगीता । […]
साँढे पाल्न अविवाहित बसेकी सेल्वरानी…
August 4, 2018 EP EDITORLeaveaComment on साँढे पाल्न अविवाहित बसेकी सेल्वरानी…
काठमाडाैं । मानिसका रहर र शोख धेरै हुन्छन् । सामाजिक बन्धनमा बाँधिएर धेरैले आफ्ना रहरलाई कुल्चिन्छन भने केहीले सामाजिक बन्धनको पर्खाललाई नै भत्काएर आफ्ना सपना साकार पार्छन । यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हुन सेल्वरानी कनगारासू । भारतको तमिलनाडू प्रदेशको मुदरै जिल्लाको मेलूर गाउँमा बस्ने सेल्वरानीले पनि सामाजिक बन्धनको पर्खाललाई भत्काएर आफ्नो सोच र सपना पूरा […]